‘काठमाडौंमा एमाले ‘क्लिन स्वीप’ हुने अवस्था देख्छु’ « Drishti News – Nepalese News Portal
‘काठमाडौंमा एमाले ‘क्लिन स्वीप’ हुने अवस्था देख्छु’
रामवीर मानन्धर नेता, नेकपा (एमाले)
२७ बैशाख २०७९, मंगलबार 10:35 am
काठमाडौं । देश स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मुख्य त दुई धार गठबन्धन गरेर अघि बढेको छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका रुपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैगरी, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पूर्व पञ्चहरुको हिन्दुवादी दल राप्रपा नेपाल र कृश्चियन पार्टीले मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन् ।
हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीमा गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ । तर, कुन गठबन्धन कसरी बन्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेका दुई गठबन्धन निर्माणको आवश्यकता र महत्व निर्वाचन जित्ने प्रयोजनका लागि मात्र बनेको छैन ।
असंवैधानिक कदम हुँदै एक्लिएको एमालेमा टिकट वितरण पनि मनोमानि रुपले भयो । एमाले नेता कार्यकर्ताले नै मनोमानि भएको भन्दै विरोध गरे । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा होमिएको एमालेले कस्तो परिणाम हात पार्ला ? यसै विषयमा नेकपा (एमाले)का नेता रामवीर मानन्धरसँग संवाद गरिएको छ । मानन्धनरसँगको संवाद मुख्य त काठमाडौंको निर्वाचनसँग केन्द्रित छ ।
यी विषयमा कहाँ–कहाँ मुद्दा छन् ? के–के भएको थियो भन्ने तपार्इंहरू खोज्नुस् । अभियन्ताहरूले पनि खोजबिन गर्दा हुन्छ । यो कति वर्ष अघिको कुरो हो भनेर सुख पाइन्छ र ? कुनै विषय उठ्यो भन्दैमा रिसाएर, झम्टेर पार्टीकै बदनाम हुने गरी प्रस्तुत हुन पाइन्छ ? मिटुको प्रश्न उठ्दैमा स्थापितले जुँडो र करातेको पोजिसन किन देखाउनुपर्यो ? गल्ती गर्नेलाई जोगाउने पक्षमा म चाहिँ छैन ।